Near Kamarkyi Housing. Lakhs 11,500.00
Near Kamarkyi Housing.
အိမ်နှင့်ခြံရောင်းမည်။ ကမာကြည်အိမ်ယာအနီး ၊ မိန်းလမ်းမကြီးဘေး။ စီးပွားရေးလုပ်ရန်နေရာကောင်း ကားမှတ်တိုင်နီး၊ စျေးနီး။ မြေအမျိုးအစား-ဂရမ်မြေ ၊ အမည်ပေါက် မြေအကျယ်- ( 70’×110′ ) ft သိန်း 11500/ (ညှိနှိုင်း) ဆက်သွယ်ရန်။ Nay chi & La min Real Estate Ph: 09 793158939, 09 795727121 Viber: 09 443139801